China Coating Services ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
I-DHUA inikeza ngezinsizakalo zokumboza ngamashidi e-thermoplastic. Sakha ukumelana nomhuzuko we-premium, anti-fog kanye nezibuko zesibuko kuma-acrylic noma amanye amashidi epulasitiki anezindawo zethu zokukhiqiza eziphambili nemishini yokucubungula. Kuyinjongo yethu ukusiza ukuthola ukuvikelwa okwengeziwe, ukwenza ngezifiso okwengeziwe nokusebenza okwengeziwe kusuka kumashidi akho epulasitiki.
Izinsizakalo zokumboza zifaka okulandelayo:
• I-AR - Ukugoqa Okumelana Nokunwaya
• Ukwembesa Inkungu
• Isembozo se-Surface Mirror
I-DHUA inikezela ngezinsizakalo zokumboza ngamashidi e-thermoplastic nezinsizakalo zokumboza ezibonakalayo zocingo oluphathekayo. Lapha sichaza kakhulu izinsizakalo zethu zokumboza ngamashidi e-thermoplastic.
Sakha ukumelana nomhuzuko we-premium, anti-fog kanye nezibuko zesibuko kuma-acrylic noma amanye amashidi epulasitiki anezindawo zethu zokukhiqiza eziphambili nemishini yokucubungula.
Kuyinjongo yethu ukusiza ukuthola ukuvikelwa okwengeziwe, ukwenza ngezifiso okwengeziwe nokusebenza okwengeziwe kusuka kumashidi akho epulasitiki. Ukwenza lokho, sisebenza nawe ukukhetha ukugcotshwa okuya ngemvelo yakho yokusebenza nezidingo zakho zokukhiqiza. Ngemuva kwalokho sihlanganisa izinsizakalo zokulungiselela ezithuthukile, ubuchwepheshe besicelo obufanele kanye nemisebenzi yokuthunyelwa ngemuva kokudala ukusebenza kahle kokumboza kwamashidi epulasitiki.
AR - Scrating esinemthombo Resistant
Ukumboza okunzima noma okokuvikela okungakhuhleki kubizwa ngokufanelekile ngokuthi ukugcotshwa okungamelana nokuhuzuka. I-AR Scratch Resistant Coating yethu ikhulisa kakhulu ukumelana nokuhuzuka nokumelana namakhemikhali eshidini ngenkathi kugcinwa izakhiwo ezivelele ezihlotshaniswa ne-DHUA acrylic noma elinye ishidi lepulasitiki, futhi kwandise impilo yesevisi yomkhiqizo.
Ukumelana ne-Abrasion okushubile okwenziwe nge-acrylic noma elinye ishidi lepulasitiki kuyisinqumo esihle lapho ukuvikelwa ekuklwebheni kuyinto ebaluleke kakhulu. Kutholakala ngokumbozwa kohlangothi olulodwa noma zombili, kulungele kahle izinhlelo zokusebenza ezidinga ukuhuzuka, ibala nokumelana ne-solvent.
I-DHUA ihlinzeka nge-anti-fog hard coating okuyi-crystal clear enamathela enikezela okuhlala isikhathi eside, ephakeme ukumelana nefogging futhi yenzelwe isiko lephepha le-polycarbonate, ifilimu le-polycarbonate, ingubo enamanzi egezwayo futhi ehambisana nokwelashwa kwesibuko. Ukusetshenziswa kwayo kusendle kakhulu endaweni ye-visor, njenge-eyewear yokuphepha, imaski & izihlangu zobuso, izinhlelo ze-elekthronikhi njalonjalo.
Ifilimu elincane le-aluminium lisetshenziswa ku-substrate, futhi livikelwe ngengubo yokuvikela ecacile. Ifilimu ingaba i-opaque ukudala indawo esezingeni eliphakeme ekhanyayo, noma ibe sobala ngokusobala ngezindlela ezimbili, eyaziwa nangokuthi isibuko esisezinhlangothini ezimbili. Imvamisa i-substrate eboshwe i-acrylic, namanye ama-substrate epulasitiki afana ne-PETG, i-Polycarbonate ne-Polystyrene ishidi lingafakwa ukudala le miphumela efanayo.
Ama-Plastics wekhwalithi ephezulu, Ukwenziwa Kwenkambiso. Cela Isilinganiso Namuhla! Sikulungele Ukusiza Ukuklama & Dala Okudingayo Ngephrojekthi Yakho.
Sula ukugcoba kwe-Acrylic